Dhaabbanni ITIYOO-TELEKOOM Maqaa #FRAUD(Gocha Seeraan alaa) jedhuun #SIM fi #QAFOO maamiltoota heddu irraa cufaa jira | oroict.com
Dhaabbanni ITIYOO-TELEKOOM Maqaa #FRAUD(Gocha Seeraan alaa) jedhuun #SIM fi #QAFOO maamiltoota heddu irraa cufaa jira | oroict.com oroict.com
Rakkoon kun, bifa adda taheen isaan mudachaa jiraachuu fayyadamtootni bilbila harkaa kan duraa caalaa, komiin hedduu biyyattii kutaa garagaraa irraa dhagahamaa kan jiru yoo tahu, Sababbiin rakkoon kun taheef maal akka tahe OROMO ICTn qorateera.
Dhaabbanni tokkichi biyya Itoopiyaa, tajaajila Telekoomii kophatti too’achuudhaan beekkamuufi Baha Afrikaa bira darbee hanga sadarkaa Idil-addunyaatti, Dhaabbolii Telekoomii maamiltoota heddu qaban keessaaa fuuldura irra kan jiru, Itiyootelekoom yeroo ammaa kana Fayyadamtoota(maamiloota isaa) irratti Qafoo bilbilaafi SIM heddu cufaa jira.
Rakkoo haala addaatiin ykn bifa haaraan ummata mudachaa jirtu tana namoota dhuunfaa tokko tokko deeggarsa nugaafataniif, tooftaalee kana dura hawaasa itti deeggarruun deeggarsa hawaasa keenyaa gochuuf yaallus, Rakkichi ulfaataafi salphatti kan hin furamne tahuu ogeeyyii keenya keessa beekan irraa hubachuun danda’ameera.
kanaafuu, rakkoon tun maalidha, maalirraa dhaabbatichi rakkoo kana uumuu filate jennee jala buunee hordofuudhaan, maddi rakkoo maali akka tahe hubachuun danda’ameera.
Akka gabaasni guyyaa 16/11/2017 icciitiin akka mirkanaayuuf Gara Walitti-qabaa Boordii Ethiotelecom kan ture Dr Dabratsioniif ergame akka ibsutti:
1ffaa – dhaabbatichi System haaraa EIR(Equipment identity register or controll Illegal Device) jedhu hojiirra oolchuu ibsee, systemicha haaraa kanaan immoo faayidaalee akka:
~Qafoo foorjiidii too’achuu
ibsa asiin dura barreessine link kana irraa dubbisuu dandeessu:
~ Iddoo Maamilli tokko jiru faana dhayuufis akka oolu hima
~ Galii sassaabuufis faayidaa olaanaa qabaachuu ibsameera.
~ Galii Biyya alaa irraa argannus too’achuufis akka oolu gabaasichi ni addeessa, kanumaan walqabatee Qafoo biyya alaatii dhufu too’achuufis akka madda galiitti eeraniiru.
Akka gaabasichaatti; Maqaa #FRAUD(Gocha Seeraan alaa) jedhuun #SIM fi #QAFOOn maamiloota irraa akka qabamuufi sababni qabamuufis eerameera. Sababootni ijoon eeraman
a) Agarsiisa iddoo irratti xiyyeeffate(Introduce Location based detaction) – Nama iddoo dhoksaa ykn rakkoo qabutti(especial area and Risk area) argame faana dhawuu. Hojii kana osoo dhaabbanni INSA keessa hin seenin DHaabbanni Ethiotelecom ofumaa hordofuu akka danda’u Hogganaaf gaaffii dhiyaateedha.
b) TCG, SS7, LD IVR, and Many internal and external detection – #Garee kana irra utaalaa
c) VOIP and OTT(Voice over Internet Protocol and Over the Top communication) – Haasa Sagalee Toora Interneetaatiinifi Haasaa isa irra guddaa ykn dheeraa akka jechuuti.
Dubbiin ijoon cufamuu SIMI fi Qafoo ummata keenyaa kanaan wal qabata.
Hawaasni biyya keenyaa rakkoolee keessattuu qaalayiinsa baasii tajaajila Telekoomiitiin walqabatee, toftaalee adda addaatiin ilmaan isaanii, fira isaanii, dhala isaanii addunyaa adda addaa keessa faffacaatee jirtu argachuuf gara toora Intereneetaatiin irra akka salphatuuf walnama hin gaafachiisu, kun biyya keenya qofa osoo hin taane akka Idil-addunyattuu tooftaa filatamaafi Gatii gadi-bu’aa tahee tajaajila kennutti jira.
Haatahuu malee, Dhaabbanni tokkichi biyya kana akka fedha Ummataa osoo hin taane, Fedhii fi faayidaa dhaabbatichaa eegsisuufi daldala mootummaa osoo hin taane Daldalaa dhuunfaa hanga jechisiisutti kan ummata ciraa jiru, dhaabbanni Itiyootelekoom yeroo ammaa tajaajila VOIP fi OTT jedhu kana cufuudhaan hawaasa rakkoof saaxilaa jiraachuun beekamee jira.
Akka gabaabsi icciitii isaanii ibsutti dhaabbatichi tajaajila kana cufuuf fkn:
~ Daandii bahiinsa Interneeta bilbila harkaa(mobile internet getway) cufuu – kanaafis System POR jedhamu bituuf ajajamuu
~ Nama Interneetaan daqiiqaa dheeraa haasa’e irratti cufuu(Block/drop OTT and VOIP) – kanaafis mirkaneessa aangawootaa eeggachaa jiraachuufi System PCRFn jedhamu ajajamee dhufa eegaa jiraachuu ibsa.
Haaluma kanaan gabaasni yeroo sanaa aangawootaafi keessa beektota dhaabbatichaatiin qophaaye amma hojitti kan hiikameefi, Hawaasa biyya keessaa tajaajiloota olitti eeraman kana fayyadamaa jiran uggura irra kaayaa jiraachuu mirkaneeffannee jirra.
Hub: Mana kana keessa rakkoon hanqina bulchiinsaafi dandeettii jiraachuu irra deddeebiidhaan eeraa turuun keenya ni yaadatama.
FURMAATAAfi Gorsa Ogeessaa yeroo itti aanu keessatti qabannee dhiyaanna.
Ethioteleco Fraud, Telecom Abuse, VOIP and OTT